June 6, 2021 - Khitalin Media
ကင်ဆာပျောက်ပြီ မြန်မာပြည် နို့ကင်ဆာ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ အူမကြီးကင်ဆာ “ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပြီဆိုရင်” အိမ်မှာ ဒုက္ခ သုတ်ခ ငွေကုန် လူပန်းမဖြစ်ကြဖို့နှင့်လူတိုင်းသက်တမ်းစေ့နေနိုင်ဖို့အတွက်မှတ်သားမိသမျှ ဖေါ်ပြအပ်ပါတယ်။ ပုံတွင်ပြထားတာကတော့ ကင်ဆာပင်ခေါ် ကင်ဆာသီးပင်ခေါ် နတ်ဆေးပင်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ သူ့အပင်ကအရွက်ဟာ ကွမ်းရွက်နဲ့ အလားသဏ္တွန် တူပါတယ် သူ့အသီးဟာအညိုရောင်ပါ။ ကင်ဆာကဲ့သို့ အသီးမှာအမြစ်တွေဖွာထွက်၍သီးပါသည်။ အာလူးအရောင်နဲ့လည်းသီးပါတယ် ။ အစိမ်းပုံလည်းသီးပါတယ်။ အညိုရောင်သီးသောအသီးကသာ ကင်ဆာနိုင်နင်း ပြောက်ကင်းပါတယ်။ ၎င်းအသီးနုကိုခူး၍စားသော်၎င်း အသီးကိုလိမ်း၍သော်၎င်း ကင်ဆာဝေဒနာယူပြစ်သလိုပြောက်ကင်းပါတယ်။ပြောက်သောဝေဒနာများမှာ (1) သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာဝေဒနာ (2) အူမကြီးကင်ဆာ (3) နို့ကင်ဆာ (4) အနာပဆုပ် (5) ကင်းနာ ‌ အစရှိသည့် အမြစ်ပွားဝေဒနာ ကင်ဆာများ လက်တွေ့ပျောက်ကင်းပါသည်။ အသဲကင်ဆာ နုရင် အသီးစားယုံဖြင့်ပျောက်ကင်းပါသည်။ နို့ကင်ဆာ ပဆုပ်နာ ကင်းနာ … Read more
ချစ်သူတွေကြားမှာ မသုံးသင့်တဲ့ စကားလုံးများ..
စကားလုံးတွေကြောင့် ကြည်နူးပျော်ရွှင်ရသလို တစ်ခါတစ်လေမှာ စကားလုံးတွေကြောင့်ပဲ နာကျင်ရပါတယ်။ ကိုယ်တကယ်ချစ်မြတ်နိုးရတဲ့ ချစ်သူလေးကို ကိုယ့်ရဲ့ စကားလေးတွေကြောင့် နာကျင်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခေါက်မှာ ကိုယ်ချစ်သူအပေါ် မပြောသင့်တဲ့ စကားတွေကိုဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) စိတ်ပျက်တယ် စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ပြောတဲ့သူအတွက်တော့ အများကြီးမသိသာပေမယ့် အပြောခံလိုက်ရသူရဲ့ ရင်ထဲမှာတော့ အတွေးမျိုးစုံဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ချစ်သူက ကိုယ်ကိုဘာကြောင့်စိတ်ပျက်တာလဲ မချစ်တော့လို့လား အချစ်သစ်တွေ့နေလို့လား ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေကြောင့် စိတ်ပျက်လာတာလား လမ်းခွဲချင်လို့လား စသည်ဖြင့် ခံစားချက်ပေါင်းစုံနဲ့ အတွေးများဝင်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ချစ်သူကိုဘယ်လောက်ပဲစိတ်ဆိုးပါစေ စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ မပြောသင့်ပါဘူး။ (၂) ပျင်းလာပြီ ချစ်သူစုံတွဲတွေကြားမှာမသုံးသင့်တဲ့ နောက်ထပ်စကားလုံးတစ်ခုက ငါမင်းနဲ့တွဲရတာပျင်းလာပြီဆိုတဲ့စကားပါ။ ကိုယ်ချစ်သူကို အပျော်အပျက်အနေနဲ့တောင် စနောက်ပြီး မင်းနဲ့တွဲတာပျင်းတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ မသုံးသင့်ပါဘူး။ ချစ်သူတိုင်းကတော့ ကိုယ်ချစ်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်ထားချင်ကြပါတယ်။ အချစ်စစ်အချစ်မှန်နဲ့ တက်နိုင်သလောက်ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေပေးနေပေမယ့် ပျင်းလာပြီအပြောခံရရင်တော့ တကယ်ပဲဝမ်းနည်းဖို့ကောင်းပါတယ်။ (၃) … Read more
ကိုယ့်အမရဲ့ သတိုးသားလောင်းကို မြူဆွယ်မိတဲ့ ကောင်မလေး ရဲ့ ဖြစ်ရပ်..
လက်မထပ်ခင် လွန်ခဲ့တဲ့ တပတ်က ကျွန်တော့်ရဲ့ ကောင်မလေးက သူ့အိမ်ကို အလည်ခေါ်ပါတယ်။ သူ့အိမ်လည်း ရောက်သွားရော့ တအိမ်လုံးမှာ သူ့ညီမ တစ်ယောက်ပဲ တွေ့တယ်။ သူ့ညီမလေး ဘယ်လောက်ညှို့အားပြင်းပြီး ဆွဲဆောင်မှု ရှိလဲဆိုတာ ပြောရင် ယုံမှာတောင်မဟုတ်ဘူး။ ကြည့်အုံး အဲ့ဒီနေ့မှာမှ အဲ့ဒီကောင်မလေးက (မီနီ-skirt) တိုတိုလေးကို ဝတ်ထားပြီး အတွင်းခံဘရာစီယာလည်း ဝတ်မထားဘူး…။ အဲ့ဒီကောင်မလေးက ပြောတယ် သူ့အစ်မက အခုဆို အရေးကြီး ကိစ္စနဲ့ အပြင်ကို ထွက်သွားတယ်…။ ညနေမှ ပြန်လာမည် ဆိုတဲ့ အကြောင်း ပြောပြဖို့ သူ့ကို မှာထား တယ်တဲ့…။ ဒါနဲ့ ကျွန်တော် အိမ်ထဲမှာ သူ့ညီမလေးနဲ့ စကားပြောနေတုန်း သူ့ညီမလေးက ကျွန်တော့် အနားကို ကတ်ပြီး တိုးတိုးလေး ပြောတယ်…။ သူ့အစ်မနဲ့ … Read more
မိမိ ဘာဖွားလဲဆိုတာလည်း သိနိုင်မယ်. ဗေဒင်ကိုလည်း မိမိကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်နိုင်မယ့်နည်း…
အဝေးပြေးလမ်း များတွင် ကားတာယာ ရုတ်တရက် ပွင့်/ပေါက်ခြင်းသည် ယာဉ်မောင်းများအတွက် အသက် အန္တရာယ်များဆုံး မတော်တဆဖြစ်ရပ်များတွင် တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါသည်။ HILUX SURF, PRADO, LAND CRUISER စသော 4×4 SUV အမြင့်ကားများအတွက် အဆိုပါတာယာပွင့်ခြင်းများ ပို၍ဆိုးပါသည်။ အခြားကား များ တာယာပွင့်လျှင် ထိန်း၍ရနိုင်သောလည်း 4×4 SUV အမြင့်ကားများ တာယာပွင့်လျှင် တိမ်းမှောက်ရန် ၉၀% သေချာသည်။ ယခုခေတ် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများကြောင့် တာယာပွင့်ထွက်မှု အကြိမ်ရေလျော့နည်း လာသော်လည်း ယာဉ်မောင်းများ၏ အသက်အန္တရာယ်ကို ချိန်းခြောက်ဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် “ရုတ်တရက် တာယာ ပွင့်ခဲ့လျှင်´´ဆောင်ရွက်ရန် အောက်ပါအချက်(၆)ချက်ကို အကြံပြုအပ်ပါသည်။ ၁။ (အကောင်းဆုံးစည်းကမ်း) စိတ်ချရသော သတ်မှတ်အရှိန်နှုန်းအောက်တွင်သာ မောင်းနှင်ပါ။ တာယာ ပွင့်စဉ် အရှိန်လျော့နည်းလေ … Read more
ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်များဟာ နယ်နယ်ရရ တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ သင့်ဘေးမှာ ရှိနေရင်တော့ ဆွဲထားလိုက်ပါ
ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်များဟာ နယ်နယ်ရရ တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့ သင့်ဘေးမှာ ရှိနေရင်တော့ ဆွဲထားလိုက်ပါ ဒီလိုလက္ခဏာပိုင်ရှင်များဟာ နယ်နယ်ရရတာ့မထင်လိုက်ပါနဲ့ ပါရမီရှင်တွေပါ သာမန်လူပိန်းတွေအလိမ်ခံနေရတာသိသလို အနာဂတ်ဖြစ်မည့်အရာတွေကို ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်သူများပါ အဲဒီလို X သင်္ကေတပါတဲ့ လက္ခဏာပိုင်ရှင်ဟာ ကြီးပွားချမ်းသာပြီး အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်တက်တယ် ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ မချမ်းသာသေးရင်လည်း ကြီးလာတဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်စုံနေရတက်ပါတယ်၊ နောက်ဆဌမအာရုံလိုခေါ်တဲ့ အကြားအမြင် ရတက်တယ် ဘယ်သူတွေကိုယ်အပေါ် ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ် ချက်ချင်းသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ မသိသလိုနဲ့ အသာလေး နေတတ်တယ် အကြီးအကဲ ဖြစ်တက်တဲ့သူတွေမို့ အခက်ခဲတွေ ဘယ်လောက် ရင်ဆိုင်ရ. ရင်ဆိုင်ရကျော်လွှားနိုင်တဲ့အစွမ်းအော်တိုရှိတယ် Credit Unicode ဒီလိုလက်ခဏာပိုငျရှငျမြားဟာ နယျနယျရရ တော့မထငျလိုကျပါနဲ့ သငျ့ဘေးမှာ ရှိနရေငျတော့ ဆှဲထားလိုကျပါ ဒီလိုလက်ခဏာပိုငျရှငျမြားဟာ နယျနယျရရတာ့မထငျလိုကျပါနဲ့ ပါရမီရှငျတှပေါ သာမနျလူပိနျးတှအေလိမျခံနရေတာသိသလို အနာဂတျဖွဈမညျ့အရာတှကေို ကွိုတငျတှကျဆနိုငျသူမြားပါ အဲဒီလို X သင်ျကတေပါတဲ့ လက်ခဏာပိုငျရှငျဟာ … Read more
မိနျးကလေးတှေ ပငျြးတိုငျး စဉျးစားမိတတျတဲ့ အကွောငျးအရာ (၄ မြိုး)
မိနျးကလေးတှေ ပငျြးတိုငျး စဉျးစားမိတတျတဲ့ အကွောငျးအရာ (၄ မြိုး) မိနျးကလေးတှကေ ကမ်ဘာ့အထူးဆနျးဆုံး သတ်တဝါတှလေို့တောငျ အမှတျမှားလောကျအောငျ သူတို့ အကငျြ့တှကေ တမူ ထူးခွားလှနျးလှပါတယျ။ ရဈတဲ့နရောမှာ နှဈယောကျမရှိအောငျ တျောကွတာ မြားသလို ပငျြးတဲ့အခါမှာလညျး ဖွရေခကျလောကျအောငျ အတှေးမြားတတျတဲ့ သူလေးတှေ ဖွဈပါတယျ။သူတို့တှေ ပငျြးနပွေီဆိုတာနဲ့ ဒီအရာတှကေို တှေးနတေတျကွပါတယျနျော။ (၁) ဘာစားရငျ ကောငျးမလဲ။ ပငျြးတာနဲ့ စတှေးတာကတော့ ဘာစားရငျ ကောငျးမလဲ ဆိုတာပါ။ ပငျြးနတေဲ့အခါ သူတို့က စားစရာ စားဖို့ တနျးတှေးနတေတျပွီး စားစရာပုံတှနေဲ့ ဗီဒီယိုတှကေို အှနျလိုငျးမှာ လိုကျရှာနတေော့တာပါပဲ။ ဟိုဟာလုပျစားရငျကောငျးမလား မကောငျးမလားနဲ့ ဘာမှ မစားဖွဈပဲ ပငျြးရိနတောကလညျး သူတို့လေးတှပေါပဲ။ (၂) ငါနဲ့ ဘာနဲ့လိုကျလဲ။ ဘာလုပျလို့ လုပျရမှနျး မသိတဲ့အခါ … Read more
“ မိန်းမဆိုတာ ” မယားကြီးလိုလည်း နေတတ်ရမယ်၊မယားငယ်လိုလည်း နေတတ်ရမယ် ဒါကိုမြင်ပြီးလန့်မသွားနဲ့ဦးမယားကြီးလိုနေတတ်ရမယ်ဆိုတာက မယားကြီးတွေဟာ အိမ်ထောင့်တာဝန် ချက်ရေးပြုတ်ရေး၊လျှော်ရေးဖွတ်ရေးကအစ ကလေးတာဝန်နောက်ဆုံး နှစ်ဖက်မိဘ ဆွေမျိုးယောက္ခမတွေအတွက်ပါ သိတတ် လိမ္မာတတ်နဲ့လင်ယောက်ျား စီးပွားရှာချိန်မှာ နောက်ဆံမတင်းရလေအောင် သိပ်ကိုတော်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖြစ်တယ် အဲ့လို ယောက်ျားပေါ်အလိုက်သိလွန်းပြီး အိမ်ထောင့်တာဝန် ကလေးတာဝန် မိဘတာဝန်တွေကျေပွန်လွန်းတဲ့အခါ“အော်… ငါ့အပေါ် သူသိတတ်လွန်းပါလား ငါ့ကြောင့်ပင်ပန်းလွန်းပါလား သူ့ကြောင့်သာ ငါစိတ်ဖြောင့်ဖြောင့် အလုပ်လုပ်နိုင်ပါလား” လို့တွေးပြီး ကျေးဇူးတင်တတ်တဲ့ယောက်ျားမျိုးရှိပေမယ့် ရှားတယ်။ အများစုက သူ့ကြောင့်ကိုယ်အေးဆေးစီးပွားရှာနိုင်တာကို မတွေးပဲအိမ်ထောင့်တာဝန်ပိပြီး အလှမပြင်နိုင် သာမာန်ထက် ဆယ်ဆလောက်အိုမင်းနေတဲ့ အိမ်သူသက်ထားကို ပိုက်ဆံအပ်ရတာသူတို့အတွက် မဟာနစ်နာမှုကြီးလို ထင်မြင်တတ်ကြတာပဲ အဲ့အခါ အိမ်အပြင်ထွက်ပြီး အပျော်ရှာတယ်အငယ်အနှောင်းထားတယ်ပေါ့။ အမှောင်ထဲတိုးဝင်စမှာ မသိကြပေမယ့် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ အိမ်ကမိန်းမလောက် အနွံတာမခံဘူး မိန်းမမပီသဘူးဆိုတာတွေ သိလာကြပေမယ့်မှားပြီးသားအခြေအနေကနေ ရုန်းထွက်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့အနေအထားတွေကြောင့် … Read more